Sunday January 23, 2022 - 19:30:39 in Wararka by Xarunta Dhexe
LONDON — Wasiir British ah Nadhim Zahawi ayaa maanta ku baaqday baaritaan lagu sameeyo arrinta ay sheegtay xildhibaan kala tirsan xisbiga Conservative-ka, oo ah inay xilkeeda wasiirnimo ku weysay inay tahay Muslim, taasi oo cadaadiska kusii kor
LONDON — Wasiir British ah Nadhim Zahawi ayaa maanta ku baaqday baaritaan lagu sameeyo arrinta ay sheegtay xildhibaan kala tirsan xisbiga Conservative-ka, oo ah inay xilkeeda wasiirnimo ku weysay inay tahay Muslim, taasi oo cadaadiska kusii kordhineysa dowladda.
Nusrat Ghani, oo 49 jir ah, ayaa laga qadaay xilka wasiirka gaadiidka sanaddii 2020, waxayna wargeyska Sunday Times u sheegtay in loo sheegay "in Muslimnimadeeda ay noqotay arrin walaac laga muujiyey,” intii uu socday kulan ka dhacay xafiiska ra’iisul wasaaraha ee Downing Street.
Waxaa sidoo kale loo sheegay "in ahaanshaha wasiir Muslim oo haween ah ay saaxiibadeeda kale ka dhigtay kuwa ku dhib qaba,” ayey sheegtay.
"Eedeymahan waa been gebi ahaanba, waxaana u arkaa inay yihiin meel ka dhac,” ayuu ku qoray twitter-ka.
"Marnaba ma aan adeegsan hadalladaas la ii tiriyey. Waa niyadjab in markii arrintan ay horey usoo baxday ay Ms Ghani diiday inay kala hadasho xisbiga Conservative-ka si baaritaan rasmi ah ah loogu sameeyo,” ayuu yiri Spencer.
Xildhibaanada abaabulka u qaabilsan dowladda ayaa wajahaya eedeymo kale, kadib markii xildhibaan William Wragg uu ku eedeeyey "inay baqe-maaleen” (Blackmail) xildhibaanada dhaliila ra’iisul wasaare Boris Johnson si ay uga hortagaan inay xilka ka tuuraan.
"Islaam naceybka iyo nooc kasta oo cunsurinimo ah meelna ugama banaana xisbiga Conservative-ka,” ayey Zahawi soo dhigtay twitter, ayada oo Nusrat ugu yeertay "saaxiib, shaqo wadaag iyo xildhibaan maskax badan.”
"Tani waa in si wanaagsan loo baaraa, oo cunsurinimada xididda loo siibaa.”
Wasiirka Cadaaladda Dominic Raab ayaa arrintan ku qeexay "eedeyn halis ah,” hase yeeshee wuxuu BBC-da u sheegay in la baari doono kaliya haddii Nusrat ay soo gudbiso ashtako rasmi ah.
Golaha Wasiirada Oo Ka Hadlay Qodobo Dhow Ah
01/09/2016 - 21:37:48
Shirka Golaha Wasiirada Maamulka Goboleedka Galmudug Oo Maanta Laga Soo Saaray War Saxaafadeed + Akhriso
29/08/2016 - 20:52:03